घर क्लासिक स्टार्स डिएगो माराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
LB पूर्ण स्टोरी को एक फुटबल भगवान प्रस्तुत गर्दछ सर्वोत्तम Nickname द्वारा ज्ञात; 'ब्रह्मांड कोट'। हाम्रो डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनलल्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता लाउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उनीहरूको बारेमा धेरै ज्ञात तथ्याङ्कहरू धेरै र बन्द र अन-पिच भन्दा पहिले आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ। थप adieu बिना, सुरु गर्न।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -प्रारम्भिक बचपन
डिएगो आर्मोडो माडाडोना अष्ट्रेलिया 30, 1960 मा विला फेरिटोटो, ब्यूनस आयर्सका एक प्रांत, आमाबाबुलाई अर्जेन्टीना, डन डिएगो (ड्याबो) र डल्मा साल्भाडोरा फ्रान्को (आमा) मा जन्मिएको थियो।
उनी रोमन क्याथोलिक परिवारमा आठ जना बच्चाहरु को पाँचौं जन्मको जन्म भएको थियो। माराडोनाको पहिलो नाम ग्रीक र हिब्रूमा यसको उत्पत्ति हो। यसको अर्थ हो कि एक आपूर्तिकर्ता (अर्को स्थान लिनको लागी) वा एक शिक्षक। उनको मध्य नाम अरमान्डो हो - यसको अर्थ "सेनामा सेना।"
माडाडाडो विला फेरिटोटो को आफ्नो खराब तर घनिष्ठ घरपरिवारको बिचमा उभियो। तिनको परिवार शहरमा सबैभन्दा धेरै भन्दा कम थियो जुन उनीहरूको ठूलो संख्या छन्। तिनका पिता डन डिएगो एक ईटाईर र कारखाना कर्मचारी थिए, जसले तीन भारी शुल्क केटाहरू, पाँचवटा केटीहरू, र तिनको बाहिरी घर घर पत्नी, डालमा प्रदान गर्न संघर्ष गरे।
गरिबी तथापि सफल हुन सकेन। मडाडाडो फुटबलको साथ पहिलो सम्पर्क आयो जब उनको आफ्नो चचेरे भाई, बेटो जरात द्वारा उनको पहिलो फुटबल बलमा उपहार दिइएको थियो। यो आफ्नो तेस्रो जन्मदिनमा भयो। युवा डिएगोले उनको शर्ट भित्र6महिनाको लागि बिस्तारै सुत्न सकेन यो चोरी हुनबाट बच्न। यो बल कहिलेकाँही आफ्नो आमाले पकडिएको थियो जुन उसले अध्ययनमा ध्यान केन्द्रित गर्न एक पेशेवर एकाउन्ट्ट हुन। यसले धेरै समय सकिनन् किनकि उनले अन्ततः फुटबल उनको बुलाउने महसुस गरे।
डिएगो माराडोना बचपन स्टोरी
उनले अपेक्षाकृत जवान उमेरमा फुटबलमा मन पराए। नौ वर्षको उमेरमा उनले फुटबल खेल्न सिकेका थिए। पूर्ण फुटबल खेलको साथ उनको पहिलो सम्पर्क आयो जब उनको नाम गाँउ को टीम मा शामिल भएको थियो "सानो प्याज"। जब उनि सानो प्याज संग थिए, उनले उनको 140 सीधा खेलहरु जीतने को लागि टीम को नेतृत्व गरे।
उत्कृष्ट डेरिबलिङ एक्शन, शक्तिशाली सहयोग, सटीक पास र प्रभावशाली फुटवर्क भयो जसले डिएगो मार्डोना आफ्नो बचपनको समयमा छोटो अवधि भित्र रक्सी माथि उठ्यो।
यसका साना बच्चाहरु लाई अत्यन्त सजिलै संग धेरै अतीत बच्चाहरु लाई दौडने को देखेर आश्चर्यचकित थिए उनको दर्शकहरु को प्रशंसा गरियो। फुटबल समाचार आउटलेटले एक लेख प्रकाशित गरिसकेपछि लामो समय लागेन। "एक बच्चा थियो एक रवैया र तारा को प्रतिभा संग", यद्यपि तिनीहरूले आफ्नो नाम "क्यारडोना" लाई गलत मान्दथे।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -पारिवारिक जीवन
फेथर: डिएगो संक्रमित एरिक्विना, एरिनिनास मा जन्मिएको थियो र वर्षौं सम्म उनले अर्जेन्टिना जलमा घुमाईएको डुङ्गाले जीवन बिताउने यात्रुहरू कमाएका थिए।
डिएगो मराडोना र बुबा
धेरैले उनलाई डिएगोको सपना पत्ता लगाएको व्यक्तिको रूपमा मानिदिएका छन्। उहाँले आफ्नो छोराको क्यारियरको सुरुमा ठूलो वित्तीय बलिदान गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो छोरालाई हेरेर कारखानामा अनन्त घण्टा काम गर्नुभयो। उनी अर्जेण्टिना फुटबलमा आफ्नो छोराको महत्व जान्दथे। यसैले उहाँ र उनको श्रीमतीले छोटो छोरोको खेललाई कहिल्यै छोडेनन्।
"जो व्यक्ति उहाँलाई विजय हासिल गर्न चाहन्थे। मैले तिनको छातीलाई छाती दिएँ र मैले सोधे कि उसले पेले समात्न सक्छ वा यदि त्यो राम्रो थियो। त्यतिबेला पेलले मेरो दिमाग छोड्यो, " उसले भन्यो।
मार्डोनाको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन पनि बुबा पनि थिए, जब उनले2मा विश्व कप क्वाटर फाइनलमा इंग्ल्यान्डमाथि 1-1986 विजयमा दुवै गोल गरे। "कसैले आफ्नो हातको साथ लक्ष्य देखेनन्, म पनि होइन। यो त्यस्तो सानो ह्यान्डबल थियो कि जब उनीहरूले फेरि खेल्यो र त्यसमाथि उनीहरूले आफ्नो हात बाहिर निकाल्छन्।"
उसले लत र स्वास्थ्य समस्याहरूको साथ आफ्नो छोराको समस्याको माध्यमबाट पनि पीडित गर्नुपर्ने थियो, तर सधैँ डिएगो थियो "एक उत्कृष्ट, विशेष छोरा"।
"उहाँले मलाई एक अनुपयुक्त गर्व दिनुहुन्छ, किनकि एक बच्चा जो माछाबाट बाहिर आइपुग्थ्यो, सारा संसारले उहाँलाई सम्झनका लागि अमूल्य छ।"
उहाँ सबैजनासँग नजिकको मित्र हुनुहुन्छ लिओनेल मेस्सी।
डन डिएगो, फुटबल किंवदंती डिएगो माराडोनाको पिता अस्पतालमा भर्ना भएको हो। रिपोर्टहरूले संकेत गरे कि उनले श्वसन र हृदय समस्याको सामना गरे। यो घटना 87 वर्षको उमेरमा थियो जब उनी मरे।
उनी डल्मा साल्भाडाडो फ्रान्कोसँग विवाह गरे र 8 जना बच्चा थिए। एना, रीता (बिल्ली), एलिसा (लिली), मारिया रोसा (मरियम), रौल (लोलो), ह्यूगो (टर्को) र क्लाउडिया (कैली), साथ नै डिएगो आर्ममण्डो, "पेलुसा"।
सत्यलाई भनिएको छ; कुनै अन्य व्यक्ति वा कार्यक्रमले Dalma Salvadora फ्रान्को भन्दा बढी प्रभाव पारेको छ, राम्रो रूपमा 'डोना टोटा', उनको छोराको क्यारियर र जीवनमा।
यो इमान्दारता महिलाको लागि फिटिंग श्रद्धांजलि हो जसले कसैलाई भन्दा बढी र उनको छोरालाई सही बाटोमा रहन लडेका भए तापनि कहिलेकाहीँ यो असंभव काम लागेन।
अलि डिएगोक्स वर्षमा माराडोनाले आफूलाई अक्सर आफ्ना आमा र तिनका पाँच भाइबहिनीहरूलाई सुरक्षा दिनका लागि बलिदान र प्रयासको व्याख्या गर्न खोजेको छ, यो 'एली डिएगोको आमा' को प्रभावलाई उल्टाउन गाह्रो छ। बाह्य ब्यूनस आयर्स शान्ती शहर विला फेरिइटोटोमा। यहाँ उनको आमाको लागि उहाँको हृदयमा एक शब्द हो।
"13 वर्षको उमेरमा मैले एहसास गर्यो कि मेरी आमाले कहिल्यै पेट दुख्ने गर्नुभएन," डिएगोले आफ्नी आमाको सुरक्षात्मक प्रविधिको बारेमा आफ्नो मनपराएका एन्डिडोट्सलाई सम्झन थाले। "उनी कहिल्यै पेट दुख्ने गर्थे, त्यो सिर्फ हामिलाई खान चाहन्थे। हरेक समय खाना आउनेछ, त्यो 'मेरो पेट दुख्छ' भन्थ्यो। कस्तो झूटो! यो थियो किनकी त्यहाँ गोल गर्न पर्याप्त थिएन। यसकारण म मेरो पुरानो महिलालाई धेरै माया गर्दछु। "
उनको आमा उनको क्यारियरको हरेक चरणमा उहाँ त्यहाँ थिए। उनले बाकीका छोराछोरी डिएगोसँग बस्न छोडे। उनको साथ रहँदा, उनीहरूले दुर्व्यवहारका थप जीवनशैलीलाई0न्यूनतममा नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भको रूपमा बिजुलीलाई लडाई दिए। औषधिको कारण माराडोनाले सेवानिवृत्त गरे पछि उनी कारण थिए। मराडोना उनको साथमा उनको धूम्रपान आदतको साथ व्यवहार गरे। उनले केवल भाप ई सिगरेट व्यवस्थापन गर्न सक्थे।
माराडोनाले आफ्नो आमालाई यति धेरै माया गरे कि उसले उसलाई आमाको माया महसुस गर्न जनताको चमक आँखामा चुम्बन गर्न सक्थ्यो। यो, धेरै मानिसहरूको बारेमा सहज थिएन।
उहाँ उनको मर्दा बिदा पनि उनको साथ थियो। उनको प्राइममा मार्डोनाको आमा अनगिन्ती संख्यामा गुर्देको समस्याहरूको कारण अस्पतालमा गएका छन्।
अर्जेंटीना किंवदंती मातृ शनिवार 19 नवंबर, 2011 मा, दिन को लागी गुर्दे को विफलता को लागि अस्पताल मा लिया पछि।
राउल मराडोना: उहाँ माराडोनाको तुरुन्तै सानो भाइ हुनुहुन्छ। उनले अर्जेंटीनाको लागि खेले बोका जूनियर्स, स्पेन मा Granada, र पेरू मा Deportivo नगरपालिका; उनी जापान, क्यानाडा र भेनेजुएलामा पनि खेले।
ह्यूगो हिरन माडाडोना: अर्को9मा 1969 मा जन्मिएको अर्को सानो भाइ। उहाँ एल टर्को पनि जान्नुहुन्छ। उहाँ आफ्नो बुबा भाइ डिएगो संग एक विचाराधीन समानता संग एक हुनुहुन्छ।
उहाँ एक पटक हुनुहुन्थ्यो एउटा हो अर्जेण्टीनी संघ फुटबल कोच र पूर्व खेलाडी। उहाँले एक रूपमा खेल्नुभयो मिडफिल्डर दक्षिण अमेरिका, युरोप, जापान र क्यानाडाका क्लबहरूको लागि, र अर्जेंटिना यू-एक्सएनमक्स राष्ट्रिय टोलीको सदस्य थियो।
SISTERS: डिएगो मराडोनाको कुल5बहिनीहरू छन् किनभने तपाईं तल देख्न सक्नुहुनेछ।
तिनका तीन जना बहिनीहरू र दुई जना भाइहरू छन्।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -सम्बन्ध जीवन
डिएगो माराडोनाले नोभेम्बर 7, 1984 मा आफ्नो लामो समय प्यारी क्लाउडिया Villafane संग गली चलाए।
तिनीहरू दुवैलाई प्रेम र समानुपातिकमा एकसाथ बस्छन्। उनी उनको साथ बसे र उनको प्रयास गर्दै सालहरु को माध्यम ले देख्यो।
दम्पतीले दुई छोरी, दमा नारे र गिनिनिना डायनाराहलाई आशीर्वाद दिए।
Dalma Maradona एक Argentinean अभिनेत्री र गायक हो। उनी अर्जेन्टिनाको बारटोरि नर्टेमा2अप्रिल, 1987 मा जन्मिए। उनले हङगो मिडोन थिएटर कला स्कूलमा उनको अभिनय करियर गरे। उनी इन्टिट्युटो यूनिवर्सिटियो डे एरेटे देखि प्रदर्शन मा उनको डिग्री कमाई गई। उनी सबै भन्दा राम्रो बच्चाहरु को श्रृंखला Cebollitas मा सोफिया जीवन ल्याउन को लागि जानिन्छ।
उनको दोस्रो छोरी, Giannina मडाडोना 16th मई, 1989 मा जन्म भएको थियो। त्यो पेश गरियो सर्जियो अगुरो 2008 मा डिएगो माराडोना द्वारा, र दुवै चाँडै सँगै लाग्न लाग्यो। Giannina विवाहित सर्जियो अगुरो 2008 मा, र उनको छोरा बेन्जामिन 2009 मा जन्मिएको थियो। जो जोडी 2013 मा तलाक भयो।
डिएगो माराडोना र तिनकी पत्नी क्लौडिया विलाफेनलाई 15 वर्षको लागि विवाहित भएको थियो र 2004 मा फर्किनु भयो। उनको तलाक कार्य को समयमा, उनले एक अवैध छोरा, डिएगो सिनाग्रालाई स्वीकार गरे कि इटाली मा फुटबल खेल्छन् (लेखन को समयमा)।
उनी आफ्नो पूर्व-दीर्घकालिक साझेदार वेरोनिका ओजाडेबाट 2013 मा अर्को छोरा, डिएगो फर्नांडोसँग पनि आशिष् पाए।
1980s सम्म 2004 सम्म, उनले एक औषधि को बिरुद्ध बने, जो उनको स्वास्थ्य र प्रदर्शन को प्रभावित गरे। यद्यपि उनले क्युबालाई सम्बोधन गरे र एक औषधि पुनःबहाली योजना पछ्याउने प्रयास गरे, चीजहरू राम्रो लाग्दैनन् किनकि उसले 2004 मा कोकिन ओभरडोज पछि एक प्रमुख माइकोडियल इन्फेरेशनको सामना गर्यो।
माराडोनाको दुई छोराछोरी छन् - कानूनी रूपमा। क्रोधको तिर एक थोपा असामान्य मनोवृत्तिमा उहाँले एक पटक यसो भन्नुभयो: "मेरो वैध छोराछोरीले Dalma र Giannina हो। बाकी मेरो पैसा र गल्तीहरूको उत्पादन हो। "
यो ईश्वरले आफ्नो अवैध छोरा, डिएगो सिनाग्रालाई एक प्रेस कन्फिगरेसन भाषणको समयमा गुमायो।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -सारांशमा क्यारियर
धेरैजनाले उनको प्याजको साथ सानो प्याजमा परिवर्तन गरे। 12 को उमेर मा, उनको लस Cebollitas को लागि खेलन को लागि चुनेको थियो। उहाँका स्रोता दर्शकहरूलाई सराहना गर्दछन्। 15 को उमेर मा, उनले Argentinos Juniors संग आफ्नो पेशेवर पहिलो बनाउन को लागि मौका मिल्यो। उनले लस कोबोलाइटसलाई 136-unbeaten लकीरलाई नेतृत्व गरे, आफ्नो विशाल क्षमता र प्रतिभा देखाउँछन्।
अर्जेन्टिनामा धेरै च्याम्पियनशिपहरूको लागि माराडोना नेतृत्व क्लब टोलीहरू, आफु र अरूको लागि संभावना बढाउने क्षमताको लागी एक छोटो तर डरलाग्दो मिडफिल्डरको रूपमा प्रसिद्ध थियो।
माडाडोनाले आफ्नो परिवारलाई गरिबीबाट बाहिर ल्याउन यस अवसरलाई छोडेन। यो उनको सपना थियो र उनले आफूलाई पूरा गरे।
उनको क्यारियरको शिर्षक अर्जेण्टीनीन राष्ट्रिय टोलीको सदस्यको रुपमा आयो जुन 1986 विश्व कप जित्यो। डिएगो आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय क्यारियरमा गन्दा चालको लागि एकदम सही लक्ष्य थियो। एक्लै मेक्सिकोमा 1986 विश्व कपको समयमा 53 उनको विरुद्धमा फेल गरियो। उनको प्रदर्शनमा इङ्गल्याण्डमाथि एक क्वार्टर-फाइनल विजयमा दुई ज्ञात गोलहरू थिए: पहिलो अवैध रूपमा आफ्नो बायाँ हातबाट रन बनाए, जो मार्डोनाले पछिको दावी गरे "परमेश्वरको हात"।
आफ्नो दोस्रो गोलको लागि कुनै अलौकिक सहयोग चाहिन्छ, अन्यलाई विश्वव्यापी क्षमताको तुलनामा अन्यले पराजित गर्न को लागी टावरको अनुहार पहिले नै नेटको पछाडि पाउन खोज्छ। कुल मिलाएर, मराडोनाले चार विश्व कपमा खेलेका थिए, र अर्जेन्टिनाका लागि 34 अन्तर्राष्ट्रिय उपस्थितिहरूमा एक प्रभावकारी 91 लक्ष्यहरू गोल गरे।
विश्व कप पछि, म्याडोडोना $ 7.6 मिलियन को विश्व रेकर्ड शुल्क को लागि स्पेनिश साइड एफसी बार्सिलोना मा स्थानांतरित भएको थियो। 1983 मा, मराडोना आफ्नो ध्यान राखन को लागि र कोपा डेल रे र स्पेनिश सुपर कप जीतने को लागि टीम को निर्देशित। उनको 38 खेलहरु को कुल 58 खेलहरु को स्कोर संग दोश्रो सफल भयो। तर कर्मचारी र खेलाडीहरूसँग क्षेत्रीय समस्याहरूले उनलाई $ 10.5 मिलियनको अर्को विश्व रेकर्ड शुल्कको लागि इटालियन साइड नैपोलमा पठाइयो।
पिचमा आफ्नो अविवाहित प्रतिभाको बावजूद, भावनात्मक मराडोना समान रूपमा एक विवादास्पद व्यक्तिको रूपमा चिनिन्थ्यो। उसले एक्सएनएनक्सक्समा स्पेनमा खेल्दै कोकिनलाई थपियो र 1980 मा पदार्थको लागि सकारात्मक परीक्षण पछि 15-महिना निलम्बन प्राप्त भयो। मराडोनाले तीन वर्ष पछि अर्को उच्च-प्रोफाइल निलम्बन सहन गरे, यो विश्व विश्व कपको समयमा एपिएडाइनको लागि सकारात्मक परीक्षणको लागि यो समय।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -अवकाश
माराडोनाले आफ्नो खेलकुदको गोर्खालाई आफ्नो घरको देशमा बिताए, तिनको शारीरिक दक्षता बढ्दै गएको घाइते र वर्षौं कठिन जीवन बिताउन थाले। उहाँले 1997 मा आफ्नो जन्मदिन को पूर्वमा आफ्नो सेवानिवृत्तिको घोषणा गर्नुभयो।
उनी अर्जेन्टिनाका लागि तेस्रो उच्च गोलका खेलाडीको रूपमा रेकर्ड गरिएको थियो, पछि गब्रिएल ब्याटिस्टाट र हारेन क्रेसपो।
डिएगो माराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य -प्ले प्ले लाइफ
मराडोनाले आफ्नो खेलकुदको दौडान पछाडिको समस्या आफ्नो सेवानिवृत्ति पछि जारी राख्यो। वास्तवमा, 1998, माडडोना दुई वर्ष र 10 महिना शूटिंग पत्रकारहरूको लागि 1994 मा हावा राइफल संग प्राप्त गर्दछ।
औषधि सेन्सर बीकेम आफ्नो सेवानिवृत्ति पछि खराब। मर्योनालाई 2000 र 2004 मा हृदय समस्याको लागि अस्पताल भर्ना गरियो। त्यस वर्ष 2004 अस्पताल भर्ती भएपछि, ठीक सास गर्न एक श्वेताटर प्रयोग गर्नु पर्छ।
दिल को दौड को पीडा पछि उरुग्वे मा एक निजी क्लिनिक मा भर्ती। फिडेल कास्ट्रोद्वारा क्युबामा पुन: प्राप्ति गर्न निमन्त्रणा गरिएको छ, र देशमा अर्को चार वर्षको धेरै खर्च गर्दछ।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -मोटापा मुद्दाहरू
सेवानिवृत्ति पछि, उनको दबाइ र शरद ऋतु जीवनशैली बेरोजगार भयो। यो व्यवहारले उनलाई 267 पाउन्डको वजनमा ल्यायो। यो स्पष्ट रूपमा एक मोटापा समस्या थियो। धेरैजनाले उहाँलाई देखेर आफ्नो पेटको रूपमा उल्लेख गरे "बुद्धको बेली"।
कार्टाजेना, कोलम्बियामा सर्जनहरूको मद्दतले एक ग्याँस बाईपास अपरेशन सम्पन्न भयो। यो शल्यक्रियाले पोर्टल स्टार शेड 50kg लाई हालको वजनको 121kg बाट मद्दत गर्दछ। यो 2005 मा भयो।
शल्यक्रियापछि, भर्खरै मात्र उनीहरूले ठूलो जोखिमको बारेमा चिकित्सा समुदायमा केही आलोचना उठाइयो। रोगीको लागि न केवल जोखिम, तर अस्पताल प्रतिष्ठाको लागि पनि। डिएगो माराडोना यो प्रक्रियामा मृत्यु भएको थियो।
जोखिमको बाबजुद, केहीले सर्गीलाई डिएगोको विद्रोही प्रकृतिमा मर्दा अनुमोदन गरे कि उसले पैसा छुटेको छ त्यसोभए उहाँ प्रक्रियामा मृत्यु भएको थियो।
डिएगो अरमेन्डोको प्रतिभाशाली व्यक्तित्वले उनीहरूको आहार र सर्जरी पश्चात हेरविचार गर्न मद्दत पुर्याउन सकेन, त्यसैले उनले हराएको वजनको अंश प्राप्त गरे।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -शताब्दी पुरस्कारको खेलाडी र लक्ष्य
नयाँ सहस्राब्दी आए, उनको ज्ञान मा फीफा शताब्दी को एक खेलाडी को पुरस्कार को फैसला गरे।
उनको द्वारा संचालित एक इन्टरनेट सर्वेक्षण माडोना नाउँ 20 सदी को शीर्ष खेलाडी को नाम ले। ठूलो विवादले यस घोषणाको पछि लागे।
माराडोना को अनुसार, "मानिसहरूले मेरो लागि मतदान गरे। अब तिनीहरू मलाई पेलसँग पुरस्कार साझा गर्न चाहन्छु। म योसँग कसैलाई साझा गर्न जाँदैछु। "
यो पेलको साथ आफ्नो बीफ कहाँ थियो।
अझ धेरै, इङ्गल्याण्ड विरुद्ध म्याडोडोनाको दोस्रो गोलको रूपमा मतदान गरियो "शताब्दीको लक्ष्य" फिफाद्वारा आयोजित 2002 अनलाइन सर्वेक्षणमा। उनले आफ्नो आधामा बल पाए र 11 टचमा पाँच अंग्रेजी खेलाडीहरूलाई डुबाइएका थिए, गोलको स्कोर गर्न आधा भन्दा बढी ओभरमा समाते।
उनको कौशल र प्रतिभा को श्रद्धांजलि को रूप मा, स्टेडियम मा अधिकारीहरु उनको एक प्रतिमा बनाए "शताब्दीको लक्ष्य" र स्टेडियम को प्रवेश मा राखयो।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -अर्जेण्टिना कोच
2008 मा, मराडोना अर्जेण्टीनीन राष्ट्रिय टीम कोच गर्न को लागि भर्ती गरियो।
यद्यपि अर्जेन्टिनेन्सले लियोनेल मेस्सीलाई विश्वकप खेलाडीका रूपमा लिखित एक प्रतिभाशाली खेलाडीको घोषणा गरेका थिए, उनीहरूले 2010 विश्वकपबाट 4-0 ले क्वाटर फाइनलमा जर्मनीलाई पराजित गर्यो, र माराडोनाको सम्झौता नवीकरण गरिएको थिएन।
सार्वजनिक निराशाको बावजूद, मार्डोना अर्जेन्टिनामा एक सत्तारूढ छोराको रूपमा मायालु रहेको छ जसले विनम्र शुरुआतबाट गुलाएको अन्तर्राष्ट्रिय चरणमा स्टर्डममा पुग्न सकेन।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -Tatoo
डिएगो मराडोना हाल पाँच छ tattoos, उनको छोरी दुवैको नाम सहित "गिनिना र दमा" प्रत्येक प्रेमीमा। डिएगो पनि तल बायाँ चित्रमा देखेर बायाँ टाँगेमा टरागेट गरेको छ।
डिएगो मराडोना पनि प्रसिद्ध अर्जेण्टीना मार्क्सवादी को एक टैटू छ क्रांतिकारी, चे Guevara, आफ्नो माथिल्लो दायाँ हातमा। डिएगोलाई उद्धृत गर्दै उद्धृत गरिएको छ "म उसलाई मेरो हातमा र मेरो हृदयमा राख्छु। मैले उनको कथा सिके, मैले उहाँलाई प्रेम गर्न सिकें। मलाई लाग्छ कि म यसको बारेमा सत्य थाहा छ। "
अधिक त, आफ्नो बायाँ पैदल मा क्यूबाको पूर्व प्रधानमन्त्रीको फिदेल कास्ट्रोको चित्र चित्रण हो। डिएगोले भन्यो "उहाँलाई भेट्न मेरो हातले आकाशलाई छुछ। उहाँले मेरो लागि गर्नुभएको कामलाई अविश्वसनीय छ। परमेश्वरसँगसँगै, उहाँ जीवित हुनुभएको कारण हो। "
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -उपनामहरू
डिएगो मराडोनालाई आफ्नो उत्कृष्ट क्यारियरको समयमा उपनामको साथ पूजा गरिएको थियो, तर यो मूल हो "बेरियलेट कोकोमोको" अंग्रेजीमा, "ब्रह्मांड कोट "। उनको नाम ले पौराणिक उरुग्वे रेडियो टिप्पणीकार विक्टर होगो मोरलेज द्वारा दिएका थिए र पहिलोपटक अर्जेन्टीना जनताले 1986 मा सुनेका थिए, पछि उनले इंग्ल्यान्ड विरुद्ध गोल गरेपछि मात्र। "ब्रह्मांड कोट। तपाईं कुन ग्रहबाट आउनुभयो? " उनले चिल्लाए। वर्षौंपछि टिप्पणीकारले भने कि उनको विश्वास थियो कि माराडोनाको डर्बब्लिंग यति अप्रत्याशित थियो कि विद्रोहहरुको लागि यो हावा मा एक पतंग पीछा गर्नु पर्छ।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -नापोलीको लागि प्रेम र घृणा
डिएगो माडाडोना नैपोपी मा आफ्नो समय को लागि सबै भन्दा प्रसिद्ध थियो। एफसी बार्सिलोना क्लब अध्यक्ष जोस पी लियिस नुनेजको साथमा उनीहरूको पक्षमा नपनाउने क्रममा नापाललाई आए। त्यो $ 10.48 मिलियन रेकर्ड को लागि स्थानान्तरण गरिएको थियो। माडाडोना फुटबलको इतिहासमा एकमात्र खेलाडी हो जुन दुई पटक विश्व रेकर्ड ट्राफिक शुल्क प्राप्त भएको छ।
तिनको आगमनमा, मरेडोना 75,000 प्रशंसकहरूले स्वागत गरेको थियो जब जुलाई5मा प्रस्तुत भयो, एक नाओपी प्लेयरको रूपमा 1984। उहाँको आगमनले प्रशंसकहरूको आशा बढायो र उनीहरूलाई मुक्तिदाताको आगमनमा विश्वास गरे।
उहाँले आफ्नो युगमा नयाँ उचाईको क्लबलाई उच्च बनाउनुभयो र नापालले आफ्नो जेठी सेरी ए इटाली च्याम्पियनशिपलाई 1986-87 मा जित्नुभयो। प्रशंसकको माराडोनाले मन पराए र त्यो उत्सव एक हप्ताको लागि घडीमा चलेको थियो।
उनले 1987 मा कोपा इटालियालाई जीने, नानेमएक्समा यूईएफए कप र सीरी ए ए च्याम्पियनशिपको अलावा 1989 मा इटालियन सुपरकअपलाई नाकालाई सहयोग पुर्याए। धेरै नयाँ जन्मेका छोराछोरीलाई नाम दिइयो 'माराडोना'उनको सम्मान इटालीमा।
नापालको उनको समस्या सुरू भयो जब उनले खेलहरू हराए र ड्रग्स लिन थाले। पहिलो, उनले $ 70,000 लाई ठीक मा आफ्नो क्लब द्वारा खेल र प्रहारहरु को लागि दबाइ को कारण जुर्माना मा मजबूर गरे। उनको कोकीन प्रयोग जारी राख्यो र यो पनि क्यामेरारा, आपराधिक संगठनसँग जोडिएको थियो।
उहाँले कोकोनको लागि एक औषधी परीक्षण असफल पार्न 15 महिनाको प्रतिबंध सेवा गर्नुभयो र 1992 मा नापोल द्वारा रिलीज गरिएको थियो। उनको सम्मान मा र उनको उपलब्धिहरु को लागि उनको जर्सी नम्बर 10 नेपोली द्वारा सेवानिवृत्त भएको थियो।
1996 मा माराडोना: "म हुँ, म हुँ र म सधैँ एक दबाइको लत हुनेछु। औषधीमा संलग्न व्यक्ति जो हरेक दिन यो लड्न सक्छ। "
उनले इटालियन कर मानिसलाई केही पैसाको नाकानोको कारण छोडे। अधिकारीहरूले 2009 मा भन्यो कि माराडोनाले उनलाई € 37 मिल्यो। यद्यपि, यस भन्दा आधा भन्दा बढी भन्दा बढी वास्तविक ऋणमा रुचि छ।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -उनको फुटबल आइडल
उनी ब्राजीलियन रिभेलिनो र जर्ज बेस्ट द्वारा उत्तरी आयरल्यान्डको उत्तीर्ण हुँदा प्रेरित भए।
डिएगो माराडोनाले उनीहरूको साहस, उत्कृष्ट उपलब्धिहरू र उत्कृष्ट गुणहरूको प्रशंसा गरे।
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -परमेश्वरको हात रेफरी
अली बिन नासरले रेफरी थियो जसले खेललाई अडिग गरे र सीले विस्फोट गर्यो जब म्याडोडोनाले गोल गरे। "हातको गोठालो हात"। 29 वर्षपछि माराडोना अली बिन नासर भेटियो।
यो रोचक भ्रमण अगस्त अगस्त 17, 2015 मा भयो। मार्डोना ट्यूनीसा को सबै तरिका गए र उनको रेफरी नायक को श्रद्धांजलि दिए र एक हस्ताक्षरित अर्जेण्टीना जर्सी को उनको प्रस्तुतीकरण पेश गरे।
यो अली बिन नासर थियो जुन तल चित्रमा बल पकियो।
उहाँको भेट 'अनन्त मित्र' र उहाँलाई एक हस्ताक्षरित अर्जेण्टीना शर्ट दिनको लागि उनको धेरै अर्थ थियो।
डिएगो Maradona चुम्बन र आफ्नो हृदय पछि मानिसलाई हल्लाउँदै.तिनीहरू 29 वर्ष पछि दुवै मुस्कुराए। यसले इंग्लैंड फुटबल पन्डित र समर्थकहरूको बीचमा भारी आलोचना ल्याएको थियो। तिनीहरूका घृणा जो दुवै जोडाका लागि नरम हातमा देखा पर्दा अचानक छिटो थियो।
हातको ईश्वर रेफरी - अनल्ट स्टोरी को अली बिन नासर
ट्युनिसियन रेफरी अली बिन नासरले सोधे कि उनले किन उनीहरूले पुरस्कारको निर्णय गरे दावी गरे कि लक्ष्य डोकोभ, लिसनम द्वारा प्रभावित भएको थियो।
"म डोकोभको पर्खाइरहेको छु कि मलाई के वास्तवमा के भयो भनेर संकेत दिन तर उहाँले ह्यान्डबलको लागि संकेत गर्नुभएन," बिन नासरले भने। उनीहरूलाई घृणा पारेको बावजुद, दुबै पक्षले यसलाई साझा गरे।
डिएगो माराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य - भगवान लानेसम्यानको घर
पहिलो, लिङ्गेसन, एक बुल्गारिया जसले डिएगो माराडोनाको ह्यान्ड अफ द म्याच रिपोर्ट गर्न असफल भएको लक्ष्य लक्ष्य भएको थियो। उहाँ 80 को उमेरमा मर्नुभयो। बोगदान डोकोभले आफ्नो जीवनको हरेक क्षण सोरमा बिताए, किनकि उनी अझै पनि 1986 विश्व कपमा माराडोनाको हातमा गोल गर्न सक्दैनन्।
बोगदान डकोचेभले उक्त घटनाबारे यसो भने: "यद्यपि मलाई तुरुन्तै लाग्यो कि त्यहाँ अनियमित केहि थियो, पछि त्यो समयमा फिफाले सहायकहरूलाई रेफरीको निर्णयमा छलफल गर्न अनुमति दिएनन्। यदि फिफा युरोपबाट यस्तो महत्त्वपूर्ण खेलको आरोपमा रेफरी राख्नुभयो भने, माराडोनाको पहिलो लक्ष्यलाई अस्वीकार गरिएको थियो। "
तिनले पहिले यसो भने: "डिएगो माराडोनाले मेरो जीवनलाई बर्बाद गर्यो। उहाँ एक शानदार फुटबलर हुनुहुन्छ तर सानो र मूर्ख मानिस हुनुहुन्छ। ऊ उचाइ र बुद्धिमा कम छ र एक व्यक्तिको रूपमा। निर्देश फिफाले हामीलाई खेल गर्नु अघि स्पष्ट थियो - यदि एक सहयोगी मेरो भन्दा राम्रो स्थानमा थियो भने, मैले उनको दृष्टिकोणको आदर गर्नुपर्छ। "
हातको ईश्वरको बिरोध लिङ्गमैन- द वर्ल्ड स्टोरीको बोगदान डटचेभ
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -Gadaffi संग लिङ्क
2003 मा, माराडोना माउमर गद्दाफीको तेस्रो छोरा अल-साडी द्वारा टेक्निकल सल्लाहकारको रुपमा नियुक्त गरिएको थियो। अल-साडी पेरिसिया कैल्कोओका लागि सेरि ए ए मा खेलिरहेको थियो।
मरादनाको लिंक गडाफीको परिवार-अनौठो स्टोरीको साथ
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -मराडोना चर्च
आजको समाजमा हामी एथलीटहरूलाई मूर्तिहरूको रुपमा हेर्छौं र सबै संसारका लागि एक पेडलमा राख्नेछौं। तर तिनीहरू ईश्वरको स्थितिको योग्य छन्? तिनीहरू निश्चित रूपमा के के शीर्ष-तहमा छन्, तर तिनीहरूलाई उपासना गर्न? त्यो एक नयाँ नयाँ स्तरमा छ।
तिमीलाई थाहा छ ?? .. अर्जेण्टीना प्रशंसकहरु एक "मराडोना चर्च" 1998 मा ब्यूनस आयर्स मा।
मराडोना चर्चले यस सहयोगलाई सम्पूर्ण नयाँ स्तरमा लिन्छ। यस स्थापनाका अनुयायीहरू साँच्चै यो मानिसको उपासना गर्छन् "ईश्वरीय" बायाँ खुट्टामा उसले त्यो प्रदर्शन गर्दछ जब उसले पिचमा राख्छ। 120,000 भन्दा बढी अनुयायीहरूका साथ, मराडोना चर्च डिएगो माडाडोना, एक सेवानिवृत्त अर्जेन्टिना फुटबल कथा, एक भगवान को रूप मा पूजा गर्दछ। यी अनुयायीहरूले पनि आफ्नो दस आज्ञा, प्रभुको प्रार्थना पनि बनाएका छन्, र साथै उनीहरूको आफ्नै धार्मिक पाठ छ।
चर्चको माराडोना अल्टर
अनुयायीहरूले पनि आफ्नै प्रभुको प्रार्थना गरेका छन्!
"हाम्रो डिएगो, पृथ्वीमा जुन कला छ, तपाईंको दायाँ खुट्टाको पालो भयो, तपाईंको जादू आउँदछ, उनीहरूको लक्ष्य सम्झाइन्छ।"
चर्च अनुयायीहरूले आफ्नो ईश्वर डिएगोको माध्यमबाट बस्छन्। उहाँको जीवन तिनीहरूको हो। उहाँले आफ्नो ड्रग निक्कै सामना गर्नुभन्दा अँध्यारो पटक अनुयायीहरूको सम्पूर्ण समूहमा असर पर्यो। उनीहरूको प्रिय डाइगोको जन्मसँग भेट्न तिनीहरूले वर्तमान वर्ष पनि परिवर्तन गरेका छन्। उदाहरणका लागि, वर्ष 2016 चर्च चर्च मराडोना हुनेछ 56 AD (डिएगो पछि)। तिनीहरू क्रिसमसको उत्सवको रूपमा आफ्नो ईश्वर डाइगोको जन्मदिन मनाउँछिन्।
माराडोना सदस्यको कोठाको चर्च
तिनीहरूले माराडोनाका विषयवस्तुहरू र अर्जेन्टिना ध्वज रंगका रंगहरूका साथ तिनीहरूको रूख र बेडरूम सजाउँछन्। चर्चमा दस सेट कोडहरू छन् जुन प्रत्येक सदस्यले स्थापनाको विरासतमा राख्न पछ्याउनु पर्छ।
तल्लो माराडोना दस आज्ञा हुन्;
तपाईंको घरमा तपाईंसँग मराडोना परिवर्तनको चर्च हुनु पर्छ
माराडोनाको अल्टरको चर्च
सबै भन्दा माथिको प्रेम फुटबल
डिएगोको लागि अनौपचारिक प्रेम र फुटबलको सुन्दरता घोषणा गर्नुहोस्
अर्जेंटीना शर्टको रक्षा गर्नुहोस्
डिएगोको चमत्कारहरूको खबर फैलाउनुहोस्
उसले खेलेका मन्दिरहरू र उहाँका पवित्र शर्टहरूको आदर गर्नुहोस्
कुनै पनि टोलीको सदस्यको रूपमा डिएगो घोषणा नगर्नुहोस्
चर्चको सिद्धान्त प्रचार र प्रचार गर्नुहोस्
डिएगो तपाईंको मध्य नाम बनाउनुहोस्
तपाईंको पहिलो छोरा डिएगोको नाम दिनुहोस्
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -युद्ध विरुद्ध युद्धको युद्ध
माडाडोना बनाइएका पीले
शब्दहरूको निरन्तर युद्धमा माराडोना र बीचको बीचमा अवस्थित छ पेल कहिलेकाहीँ माराडोनाको खेलाडी शताब्दीको विजेता। तल युद्ध शब्दहरू छन् जुन तिनीहरूबीच अवस्थित छन्।
पिलले माराडोनाको शासनको समयमा राष्ट्रिय टोली मालिकको रूपमा भने: "तर यो माराडोनाको गल्ती छैन। यो कसले चार्जमा राखेको दोष हो। "अर्जेण्टिना पछि पछि हिटयो र यसो भन्छ: "पछाडि संग्रहालयमा जानुहोस्। र त्यहाँ बस्नुहोस्। "
डिएगो मराडोना बचपन स्टोरी प्लस अनगल्ड जीवनी तथ्य -आक्रमणकारी आलोचना
ड्रेगोले भनेका लागि फोटोग्राफरको क्यामेरालाई तोड्न पछि डिएगोले भने "मैले यो कारणको हातले गरे।"
माराडोनाले लियोनेल मेसीलाई बचाव गरेको बेला उनीहरूको विरुद्ध कुनै आलोचनाको विरोध गरे। जुलाई 2, 2010, जब उनले यसो भने: "कुनै पनि भन्नु भएको छ कि उनको महान विश्व कप छैन बेवकूफ हो।"
2010 विश्व कप- यस भयानक हारको बावजूद टीमले टूर्नामेंटको माध्यमबाट प्राप्त गर्न सकेन। आफ्नो आलोचकहरु मा मराडोना को दोबारा। "टीओहो जो विश्वास गरेन: अब s ** k मेरो डी ** k - म क्षमा चाहन्छु महिलाहरु मेरो शब्दहरुको लागि - र चूसो राख्नुहोस् ** जी यो। म पनि सेतो वा कालो हुँ। फिफा यस फेल चकलेट बाहिर बग्नका लागि धेरै खुसी थिएनन्। तिनीहरूले उहाँलाई दुई महिनाको प्रतिबन्ध लगाए।
फीफा आक्रमण- माडाडोनाले फीफा विरुद्ध आफ्नै आफ्नै मौखिक बदला पाए जब उनले दक्षिण अफ्रिकामा 2010 विश्व कप टूर्नामेंटमा नयाँ बबलको प्रयोग गरे। उसले भन्यो- "म सबै फिफा निर्देशकहरु लाई मेरो बारे मा कुरा गर्न को लागी बंद गर्न को लागि र एक उचित फुटबल मा काम शुरू गर्न को लागि पूछना हुनेछ। यो बल बेकार छ। नियन्त्रण गर्न असम्भव छ। "
1998 विश्व कप- पछि 1998 मा उनले त्यो बर्षको विश्व कपको बारेमा भने। "खेलाडीहरू सबै वर्ग फुट छन्। तिनीहरू रोबोट पसलहरू जस्तै छन्, तिनीहरूसँग मालिश भन्दा स्नेहकको अधिक आवश्यकता छ। मलाई विश्वास छैन कि टूर्नामेंट खराब हुन सक्छ। "